Lego Friends ယခုနွေရာသီ 2020 အစုံယခုရရှိနိုင်
01 / 06 / 2020 01 / 06 / 2020 ဂရေဟမ် 2496 Views စာ0မှတ်ချက် 2020, 41398 Stephanie ရဲ့အိမ်, 41415 Olivia ရဲ့ပန်းဥယျာဉ်, 41420 ထွန်းပြက္ခဒိန်, 41421 ကလေးဆင်တောတွင်းကယ်ဆယ်ရေး, 41422 ပန်ဒါသစ်ပင်အိမ်, 41423 ကျားလေထုပူဖောင်းတောတွင်းကယ်ဆယ်ရေး, 41424 တောတွင်းကယ်ဆယ်ရေးအခြေစိုက်စခန်း, 41426 သူartအင်းအိုင် City ပန်းကဖေး, 41427 မင်းသမီး Emma ရဲ့ဖက်ရှင်ဆိုင်, 41428 သဲသောင်ပြင်အိမ်, 41429 သူartအင်းအိုင် City လေယာဉ်ပျံ, 41430 နွေရာသီပျော်စရာရေပန်းခြံ, 41432 Alpaca Mountain Jungle ကယ်ဆယ်ရေး, 41433 P ကိုarty လှေ, Friends, Lego, Lego Friends
၏နောက်ဆုံးလှိုင်း Lego Friends အစုံလိုက်တောများကိုကယ်ဆယ်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်များကိုပေးသည်။
ယနေ့ခေတ် ၂၀၂၀ နွေရာသီအတွက်ကြီးမားသောပစ်လွှတ်မှုသည်ကွဲပြားခြားနားသောအစုများနှင့်အတူထွက်ပေါ်လာသည် Lego themes များ။ Friends တောတွင်းကယ်ဆယ်ရေး၊ အားလပ်ရက်များနှင့်နေ့စဉ်ဘ ၀ များအပါအ ၀ င်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အစုများကိုရွေးချယ်ထားပါသည်။
ယခုရရှိနိုင်သောသတင်းအစု (၁၃) ခုမှာ -
41398 Stephanie ရဲ့အိမ်
အနည်းငယ်သောတည်ဆောက်သူများကိုမိသားစုဘဝတွင်သရုပ်ဖော်ခြင်း၌ရှုံးနိမ့်ပါစေ Lego® Friends 4+ Stephanie ၏အိမ် (41398) ။ သူတို့ဟာ Stephanie ကိုသူမအိပ်ခန်းထဲကိုထွက်ဆွဲတင်ပြီးအမေနဲ့အဖေဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးသူတို့မိန်းကလေးနဲ့သူမခွေး Dash ကိုကစားနိုင်တယ်လို့ဟန်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
အပေါ်ထပ်အပိုင်းကိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအောက်ထပ်ရှိအေးမြသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ကစားရန်လွယ်ကူစေသည်။ ဆိုလိုတာက ၂ friends တစ်ချိန်တည်းတွင်ကြမ်းပြင်တစ်ခုနှင့်ကစားခြင်းဖြင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုမျှဝေနိုင်သည်။ အိမ်တွင်ပျော်စရာပျော်စရာဆောင်ကြဉ်းပေးမည့်ချစ်စရာကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည်။
ကလေးငယ်တစ် ဦး သည်ရွှံ့ထဲမှဆင်တစ်ကောင်အားကယ်တင်ရန်အပြေးပြိုင်သည့်အခါကလေးသူငယ်များသည်သူရဲကောင်းအဖြစ်ကစားကြပါစို့။ Baby Elephant Jungle Rescue (41421) သည်စိတ်ကူးယဉ်ကစားရန်လှုံဆော်ပေးသည့်အင်္ဂါရပ်များဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည်။ နှင့်အတူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင် Lego® Friends မိန်းကလေးများ၊ ကလေးတွေဟာစွန့်စားမှုကစားခြင်းနာရီအတွင်းပျောက်ဆုံးနိုင်တယ်။ Lego Friends National Geographic Explorers ၏ကူညီပံ့ပိုးမှုအတွက်ဂုဏ်ယူမိပါသည်။
မော်တော်ယာဉ်များကိုအရူးအမူးစွဲလမ်းနေသောကလေးများသည်အေးမြသောကစားစရာထရပ်ကားဖြင့်ဒရာမာကားမောင်းခြင်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ရွှံ့နွံတွင်းတူးရန်အတွက်ဂေါ်ပြားတစ်ခုနှင့်တိရစ္ဆာန်အားရွှံ့နွံမှဆွဲယူရန်ချိတ်တစ်ခုရှိသည်။ နွားသငယ်ကိုဘေးကင်းရန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောသပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိသောကစားစရာနောက်တွဲယာဉ်မောင်းသည်ခရမ်းရောင်အရုပ်ထရပ်ကားဖြင့်ချိတ်ထားသည်။ ၎င်းသည်လုပ်ဆောင်မှုကိုထုပ်ပိုးထားသောသရုပ်ဆောင်ခြင်းကိုနှစ်သက်သောကလေးများအတွက်ကောင်းမွန်သောအားလပ်ရက်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ The Lego Friends တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာပျော်စရာတွင်မိမိကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရသည့်အတွက်တိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာကစားနည်းများသည်ကလေးများအတွက်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုကျယ်စေသည်။
ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောပန်ဒါများကိုသူနာပြုဆရာမလုပ်ဟန်ဆောင်နေစဉ်သင့်ကလေးကိုတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်စွန့်စားမှုတစ်ခုလုပ်ခွင့်ပြုပါ Lego Friends Panda Jungle Tree House playset (41422) ။ 7+ နှစ်အရွယ်ရှိသတ္တဝါများကိုအရူးအမူးဖြစ်စေသည့်ကလေးများကိုနာရီပေါင်းများစွာဖျော်ဖြေရန်အကောင်းဆုံးအရုပ်ရှာဖွေနေပါသလား။ မျောက်အရက်ဆိုင်နှင့်အေးသောဆလိုက်နှင့်ပြည့်စုံသောသစ်ပင်အိမ်ကစားကွင်းနှင့်သင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ကလေးများသည်ရွက်လွှင့်ပါစေ Lego Friends Tiger Hot Air Balloon Jungle Rescue (41423) နှင့်စွန့်စားခန်း။ ကလေးတွေကျားရေတံခွန်မှကစားစရာကျားပေါက်ကလေးကိုကယ်တင်ရန်မိုးကောင်းကင်သို့သွားရန်ဟန်ဆောင်နိုင်သည်။ ဒီအစုမှာကျားပေါက် ၂ ကောင်၊ ကစားစရာကြက်တူရွေးနဲ့ကလေးလိပ်အရုပ်တို့ပါရှိပါတယ်။ Lego Friends National Geographic Explorers ၏ကူညီပံ့ပိုးမှုအတွက်ဂုဏ်ယူမိပါသည်။
ဤတောတွင်း၌ကယ်ဆယ်ရေးသတ္တဝါကစားကွင်းသည်တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်စွန့်စားမှုကစားကွင်းများစွာရှိသည်artအင်း ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ဂူအိမ်မှာကစားစရာကျားကျားတွေကိုလေ့လာနိုင်သလိုကျောက်တုံးရေတံခွန်ကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးစိန်တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သူတို့ကဒီပြဇာတ်ကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ သူတို့ကစောင်းနေတဲ့ function ကိုသုံးပြီးစာလုံးတွေကိုစောင်းနေတဲ့ရေတွေနဲ့ကန်က့တွေကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။art တစ် ဦး ရဲပူလေပူဖောင်းကယ်ဆယ်ရေး။
Jungle Rescue Base (41424) နှင့်အတူတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်စွန့်စားမှုပြဇာတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပါ။ ဒဏ်ရာရနေသောတိရိစ္ဆာန်များကိုကယ်တင်ရန်တောကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းမှသည်ဆေးခန်းတွင်ကူညီခြင်းအထိကလေးငယ်များသည်အလွန်အေးမြသောတောတွင်းသစ်ပင်အိမ်၌ကစားရန်နည်းလမ်းများစွာရှာတွေ့လိမ့်မည်။ Lego Friends National Geographic Explorers ၏ကူညီပံ့ပိုးမှုအတွက်ဂုဏ်ယူမိပါသည်။
ဤသည်ပျော်စရာအစုံကျယ်ပြန့်အယူခံဝင်ရှိပါတယ်။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးဖန်တီးမှုပြဇာတ်ကိုနှစ်သက်သောကလေးများသည်တိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးဇာတ်လမ်းကိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည် Lego Friends Andrea, Mia နှင့် Olivia နှင့်ဆင်များသည်သောင်တင်နေသည့်ပျံသန်းမှုကိုကယ်တင်သည်။ ဒဏ်ရာရသူတိရိစ္ဆာန်များကိုတောတွင်းသစ်ပင်သိုလှောင်ရာနေရာသို့ပြန်ပို့စဉ်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ဂရုစိုက်မှုကိုပြသနိုင်ပါတယ်။ ရွက်ပေါက်နေသောသိပ္ပံပညာရှင်များသည်တောတွင်းသတ္တဝါများဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်နည်းပညာကိရိယာကိုနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးကင်းမျှော်စင်တွင်အသုံးပြုခြင်းကိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည်။
41425 Olivia ရဲ့ပန်းဥယျာဉ်
လူငယ်များ၏သဘာဝကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းကိုပြုစုပျိုးထောင်ပါ Lego Friends Olivia ၏ပန်းဥယျာဉ် (41425) ။ သူတို့က Olivia လေ့လာရန်ရှားပါးသောပန်းများကိုရှာဖွေရန်ကျေးလက်ဒေသကိုသူတို့စူးစမ်းနေကြသည်ဟုကလေးငယ်များမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ Olivia ၏ဖန်လုံအိမ်သို့ပြန်သွားလျှင်သူတို့သည်ကူညီရန်ဟန်ဆောင်နိုင်သည် Lego Friends စက်ရုပ်ဥယျာဉ်သုံးပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုပြီးစက်ရုပ်ကိုစက်ရုပ်ဖြင့်ကြည့်ရှုသည်။
ဤဟန်ဆောင်ကစားသောဥယျာဉ်သည်အပိုင်းအစ ၉၂ ခုပါဝင်ပြီးအုတ်တည်ဆောက်ခြင်းအတွေ့အကြုံနည်းသောကလေးများအတွက်ပင်တည်ဆောက်ရန်အဆင်ပြေသည်။ Lego ကစားစရာများ။ လှပသောကစားစရာအပင်များကမည်သည့်စားပွဲကိုမဆိုတောက်ပစေလိမ့်မည်။
41426 သူartအင်းအိုင် City ပန်းကဖေး
သူတို့နှင့်အတူထွက်ဆွဲထားချစ်သောသူတစ် ဦး ကလေးသည်သိ friends? သူ၏လက်ဆောင်ကိုပေးပါartအင်းအိုင် City ပန်းခြံ (41426) နှင့်ဤပါရီယန်းပုံစံဆွဲထားသည့်နေရာတွင်သူတို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အမီလိုက်ရန်နေ့တိုင်းသူတို့လုပ်နိုင်သည်။
စားသောက်ကုန်ကြိုက်သူများသည်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသောဖောက်သည်များအားပေးမည့်ချောချောမွေ့မွေ့ကော်ဖီဆိုင်များနှင့်ကစားခြင်းကိုကော်ဖီဆိုင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည်။ ဤအဆောက်အ ဦး ကစားစရာ၏မီးဖိုချောင်တွင်အသေးစိတ်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖော်ပြထားသည်။ အရောင်ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော်ရည်နှင့်ချက်ပြုတ်သည့်ပစ္စည်းများသည်ကလေးများ၏ဖန်တီးမှုအရည်များစီးဆင်းစေရန်ကူညီသည်။ လူငယ်များသည်သူမရေခဲမုန့်ကိုစောင့်နေစဉ်ရှဥ့်အရုပ်နှင့်ကစားပြီးသူမ၏စကိတ်စီးအရုပ်တွင် Mia ဖြစ်သည်ဟုဟန်ဆောင်နိုင်သည်။
41427 မင်းသမီး Emma ရဲ့ဖက်ရှင်ဆိုင်
ဖက်ရှင်နှင့်ဝတ်စားဆင်ယင်လိုစိတ်ပြင်းပြသောကလေးများသည် Emma ၏ဖက်ရှင်ဆိုင် (41427) ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ အထပ် ၂ ထပ်အထက်တွင်တပ်ဆင်ထားသောဤကစားနည်းတွင်ဖက်ရှင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိသည်။ ကလေးငယ်များသည်အရုပ်ငယ်လေးများကိုကလေးငယ်များကိုကူညီနိုင်သည့်အပြင်လှပသောလည်ပင်းပုံစံကိုပေါင်းစပ်။ လိုက်ဖက်ညီစေသည့်ပုံစံအသစ်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထို့နောက်ကလေးများသည်၎င်းတို့အားသပ်ရပ်လှည့်နေသောပြောင်းလဲသည့်အခန်းတွင်ရောင်ပြန်မှန်နှင့်ပြည့်စုံစွာဝတ်နိုင်သည်။
ရင့်ကျက်သည့်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းများသည်သူတို့၏ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသောအိပ်မက်များကို Emma စတူဒီယိုတွင်ကော်ဖီတစ်ခွက်ပေါ်တွင်အိပ်မက်မက်နေသောအိပ်ရာခင်းသည့်ဆိုဖာinရိယာတစ်ခုတွင်ကစားနိုင်သည်။ စတူဒီယိုတွင်အပ်ချုပ်andရိယာနှင့်လသာဆောင်လည်းရှိသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဆိုင်သို့လွယ်ကူစွာဝင်ရောက်နိုင်ရန်ကလေးများသည်စတူဒီယိုကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခု friends တစ်ချိန်တည်းမှာ2ဒေသများတွင်ကစားနိုင်ပါတယ်!
အနည်းငယ်သာတည်ဆောက်သူများသည်နွေရာသီစွန့်စားမှုလှိုင်းလုံးကိုစီးနင်း။ စီးကြပါစို့ Lego Friends သဲသောင်ပြင်အိမ် (41428) ။ ဤအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောကမ်းခြေအိမ်သည်နွေရာသီအားလပ်ရက်အပန်းဖြေခြင်းတွင်လူငယ်များကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်ရန်အထောက်အကူပစ္စည်းများနှင့်ပြည့်နေသည်။ ကလေးများသည်မီးဖိုချောင်တွင်ဘာဂါလုပ်ရန်၊ လှော်လှေကိုနင်းရန်၊ လှိုင်းစီးရန်အရုပ်ကိုစီးရန်သို့မဟုတ်သူတို့၏ကစားစရာကင်မရာကိုခိုးယူရန်ပါးနပ်သောကဏန်းများကိုတားဆီးနိုင်သည်ဟုဟန်ဆောင်နိုင်သည်။
ဒီ 444-piece အအစုံပျော်စရာအတွက် crams ။ အပြင်ပန်းရေချိုးခန်းနှင့်မိန်းကလေးများသည် p ကိုပြင်ဆင်ရန်အတွက်ရေချိုးခန်းရှိသည်arty စပီကာများ၊ အလင်းများနှင့်ကီးဘုတ်များပါ ၀ င်သည့် DJ ကျန်သည့်နေရာကိုထုတ်ဖော်ရန်ခေါင်မိုးပေါ်လာသည်။ ကလေးတွေဟာညအချိန်မှာဝေးကွာနေတာကိုမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ် friends အေးမြတဲ့ကမ်းခြေ p မှာarty ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပြီးတဲ့အခါမှာညအချိန်မှာမိန်းကလေးတွေအတွက်နှစ်ထပ်နှစ်ပြားနဲ့စားပွဲခုံတစ်ခုပါရှိပါတယ်။
41429 သူartအင်းအိုင် City လေယာဉ်ပျံ
ကလေးများ၏စိတ်ကူးများကိုသူနှင့်အတူပျံသန်းပါစေartအင်းအိုင် City လေယာဉ်ပျံ (41429) ။ ဤလက်တွေ့လေယာဉ်ပျံကစားနည်းတွင်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်းပုံပြင်များကိုကစားခြင်းကိုကလေးများနှစ်သက်ကြလိမ့်မည်။ တကယ့်အရာလိုပဲရွေ့လျားလှေကားထစ်အဆင့်ဆင့်၊ လေယာဉ်မှူးနဲ့လက်ဆွဲအိတ်တွေရှိတယ်artပြုပြင်တွန်းလှည်းတစ်ခုတောင်မှရှိတယ်။
ဒီအင်္ဂါရပ်ပါသောလေယာဉ်ပျံကစားစရာသည်ကလေးများအတွက်တကယ့်ဘဝအခြေအနေများကိုကစားစေနိုင်သည်။ ကလေးများသည်အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်သောကမ္ဘာကြီးကိုကစားရုံထက်မကပိုနှစ်သက်ကြပြီး၊ ထိုအရာများဖြင့်သူတို့ကလက်မှတ်များကိုစကင်ဖတ်ရန်နှင့်သူတို့၏ခရီးဆောင်အိတ်များကိုစစ်ဆေးရန်ဟန်ဆောင်နေကြသည်။ ကုလားထိုင်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသောတီဗီဖန်သားပြင်များကဲ့သို့ပါးနပ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ပြဇာတ်ကိုအမှန်တကယ်ရှင်သန်စေသည်။ အရုပ်သေးသေးလေးသုံးခုနှင့်အတူကလေးများသည်လေယာဉ်ပျံကိုခရီးသည်သို့မဟုတ်လေယာဉ်မှူးအဖြစ်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်။
ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ထိုက်တန်သူတစ်ယောက်ကိုသင်သိပါသလား။ ဆောက်လုပ်ရေးစိန်ခေါ်မှုနှင့်ဖန်တီးမှုပြဇာတ်ကိုနှစ်သက်သောကလေးများအတွက်ဤအံ့ဖွယ်အဆောက်အအုံကစားစရာ။ နွေရာသီပျော်စရာရေပန်းဥယျာဉ်ကစားစရာအစု (41430) ကိုကလေးများအား tained ည့်ခံကျေပွန်စွာထားနိုင်ရန်အေးမြသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါရှိသည်။ ၎င်းတွင်ဇွန်လ -၂၀၂၀ အသစ်စက်စက်ဖုံးနေသောပြွန်ဆလိုက်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဆလိုက် ၁ ခုမဟုတ်ဘဲ ၃ ခုရှိသည်။
ထပ်မံ၍ ပျော်စရာကောင်းသောအချက်မှာရေသေနတ်နှင့်ရေပုံးတစ်ပုံးရှိသည် friends အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒါဟာအားလုံးရေပန်းခြံ splash ပျော်စရာအကြောင်းကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သော်လည်း။ မော်ဒယ်၏နောက်ကျောတွင်ကစားခြင်းကိုတိုးချဲ့ရန်အေးဆေးငြိမ်သက်သောအင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ ကလေးများသည်ရေပူထဲ၌စိမ်ခြင်း၊ အနှိပ်ခံခြင်း၊
41432 Alpaca Mountain Jungle ကယ်ဆယ်ရေး
ကယ်ဆယ်ရေးစွန့်စားမှုကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သောကလေးတစ်ယောက်ကိုသင်သိပါသလား။ Alpaca Mountain Jungle Rescue (41432) မီးတောင်အဆောက်အအုံနှင့်အတူသူရဲကောင်းမြင်ကွင်းများကိုဆော့ကစားရင်းနာရီပေါင်းများစွာပျော်စရာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွင်သူတို့ကိုပျောက်ဆုံးအောင်ကူညီပါ။ Lego Friends National Geographic Explorers ၏ကူညီပံ့ပိုးမှုအတွက်ဂုဏ်ယူမိပါသည်။
ကလေးငယ်များသည်အရုပ်ငယ်လေးများကိုတောတောင်၏ပေါက်ကွဲသောမီးတောင်မှ Alpacas များအားကယ်တင်ရန်သို့မဟုတ်တောင်ကုန်းများရှိသည့်ဂူများကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ရန်ကူညီနိုင်သည်။artဇသဘာဝရတနာ။ သူတို့ရိုးရှင်းစွာနှင့်အတူထွက်ဆွဲထားကြိုက်တတ်တဲ့လျှင် friendsသူတို့ကအရုပ်ခန်းထဲမှာလုပ်နိုင်တယ် ၎င်းတွင်ချစ်စရာအစားအစာဒြပ်စင်များ၊ တိရိစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကစားစရာ walkie-talkie၊ လက်နှိပ်ဓာတ်မီးနှင့်မှန်ဘီလူးစသည့်သုတေသနဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါရှိသည်။
41433 P ကိုarty လှေ
P ကarty Boat (41433) သည်ကလေးများကိုကမ်းခြေသို့သယ်ဆောင်ကာပင်လယ်ကမ်းခြေ၌ပျော်စရာနာရီများ၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ဒီကစားစရာလှေ playset set တွင်တည်ဆောက်နိုင်သောအရုပ်သေးသုံးရုပ်ပုံများနှင့်နွေရာသီအားလပ်ရက်ကိရိယာအစုံအလင်ပါရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ကလေးတွေသည်ပျော်စရာကမ်းခြေအခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဒီရေ partပြဇာတ် st မှာ y ကလှေ packs ကိုartအင်း ကလေးတွေအတွက်ကမ်းခြေကိရိယာအစုံအလင်ငှားရမ်းခြင်းကိုစိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည်arty ရွက်ဖျင်ဖျော့ဖျော်ဖြေသောအဆိုတော်များသည် Andrea နှင့်လက်ဆွဲကစားစရာမိုက်ကရိုဖုန်းကိုသူမ guests ည့်သည်များအားဖျော်ဖြေချင်သည်။ ဘုတ်အဖွဲ့တွင်သူတို့သည်ပဲ့ကိုယူပြီးလှေကိုရွက်လွှင့်သည်သို့မဟုတ်အသေးစိတ်အခန်းအတွင်းအပန်းဖြေနိုင်သည်။ တက်ကြွသောကလေးများသည် p ကိုယူနိုင်သည်art Ethan ၏, သူ့ရေ scooter အပေါ်လှိုင်းတံပိုးရိုက်။
← LEGO Creator နွေရာသီ 2020 အစုံယခုရရှိနိုင်
LEGO ဟယ်ရီပေါ်တာ 2020 ကိုယခုရရှိနိုင် →